Nicholos Kay oo hada gaaray Garoowe shirarna la leh madaxda Puntland | Nicholos Kay oo hada gaaray Garoowe shirarna la leh madaxda Puntland – Latest News
« Maamulka Jubba oo qabanaya bisha September Wajiga Labaad Shirka Dib u…
Wariye Cabdulahi Colombo “Sirdoonka Dawlada Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa… »
Nicholos Kay oo hada gaaray Garoowe shirarna la leh madaxda Puntland
Garoowe (GT)-Wakiilka Soomaaliya u jooga xog-hayaha Qaramaada Midoobay,Nichalos Kay ayaa goor dhaweyd gaaray magaalada Garoowe oo xarun u ah Puntland.
Nichalos Kay oo ay waheliyan mas’uuliyin kale oo ka tirsan xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Garoowe ku soo dhaweeyey,wasiirro iyo golayaasha xukuumadda Puntland,waxaana ay markiiba u gudbiyeen xarunta madaxtooyada.
Madaxweynaha Puntland,Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa madaxtooyada ku soo dhaweeyey waftiga,waxaana la sheegay inuu markiiba bilowday shir albaabadu ay u xiran-yihiin.
Shirka madaxda Puntland iyo Nichalos Kay waxaa la sheegay inuu qaadan doono saacado badan,waxaana arrinta ugu weyn ee laga wada hadli doono ay noqon doonta xalinta khilaafadka dhex-yaalla dowladda faderaalka iyo Puntland.
Nichalos Kay waxaa kalo uu la shiri doona Isimadda Puntland,waxgarad iyo bulshada qeybaheeda,lamana shaacin inta uu qadan doono booqashada uu ku tagay Garoowe.
Xafiiska UNSOM ee Garoowe ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay galinka danbe ee maanta ka dhici doonto munaasabad ballaaran oo lugu soo bandhigi doono waxqabadka xafiiska oo Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.